Waa Inaa Facebook-ga Ka Baxdaa Marba Hadii Aad La Kulanto Marxaladahaan Muhiimka Ah “Ka bax Facebook-ga”. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Waa Inaa Facebook-ga Ka Baxdaa Marba Hadii Aad La Kulanto Marxaladahaan Muhiimka Ah “Ka bax Facebook-ga”.
Published: August 25, 2014, 12:00 am
Badiyaaba wakhtigan xaadirka ah wakhtigu wuxu nagaga lumaa facebook ama chating online ah. Technology-gan cusub faaidoyin badan ayu leeyahay, laakin marka si khaldan loo isticmaalo khasaare ayu yeesha.
Ka bax facebook-ga…..
Ka bax facebook-ga markay wakhtiga salaada gaadho, markiiba ka bax facebook-ga oo salaada tuko adigo aadaabta salaada iyo khushuucdeeda ilaalinaya. Ilaahay uun baa og inay salaadaadi u danbayse tahay iyo in kale.
Ka bax facebook-ga haday labadaada waalid midkood ku yeedho, waa xaq waalidka kugu leeyahay. Ilaahay ayaa ina faray usama falkooda markaa waa inaad adeecda,
Ka bax facebook-ga haday reerkaagu ama cida aad qaraabada tihiin ku baahdo. Ku dadaal inaad wakhti wanaagsan la wadaagtid reerkaaga. La fariiso oo is waydaarsada sheekoyinka wanwanaagsan iyo wixii anfac leh.
Ka bax facebook-ga hadaa laguugu yeedho meel muxaadaro ay ka socoto ama khudbad ama cashar. Waxa laga yaaba in meesh laguugu yeedhayo aad ka maqashid kalmad saamayn badan iyo anfac badan noloshaada kugu yeelata.
Ka bax facebook-ga hadu fadhiga aad facebook-ga ku fadhidid dheerado oo habeenka badankii ku qaadatid oo sabab kugu noqday in salaadahaagu iyo hawlahaagu kugu seegaan.
Ka bax facebook-ga hadaad ku hamido ama niyadsato inaad la wadaagtid asxaabtaada facebook-ga kugu jirta wax danbi ah ama wax munkar ah aad dadka ugu yeedhaysid oo kugu noqon doona markhaati maalinta qiyaamah sida heesaha iyo wixii la mid ah. Ku dadaal inaad dadka la wadaagtid wixii anfac leh ama faaido u yeelan doona noloshooda si u Ilaahay adna kaa ajar siiyo.
Daawo: Lamaane Soomaali ah oo Barnaamij xanuunbadan laga diyaariyay Noloshooda.